युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? लिनुहोस् टीप्स! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? लिनुहोस् टीप्स!
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार १५:५६ लेखक nepali janta
काठमाडौं । यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु हुने गर्छन् । ती अध्ययनबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि राजी बनाउने भन्ने बारेमा पत्ता लागेको छ ।
३३ किलो सुन तस्करी काण्डः बाजेको सेकुवामा शिलबन्दी, नेकपा नेताकाे पालाे कहिले ?
काठमाडौँ । ३३ किलो सुन तस्करी र भरिया सनम शाक्य हत्याको घटनाको छानबिनको क्रममा गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले काठमाडौ‌ं उपत्याकाका…
कास्की । चिकित्सा शाष्त्र अध्ययन संस्थान पोखरा नर्सिङ क्याम्पसका एक दर्जन सटरहरु विना टेण्डर भाडामा लगाएर बर्षौंदेखि अनियमितता गर्दै…
काठमाडौैं । सरकारले शुक्रबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अवधारणालाई…
सुकुम्वासी बस्तीमा हात्तीको आतंक : घर र मन्दिर भत्काए, स्थानीयको भागाभाग
महोत्तरी । महोत्तरीको जिल्लाको सुकुम्वासी बस्तीमा जङ्गली हात्तीले घर र मन्दिर भत्काए को छ । बर्दिबास नगरपालिका–८ स्थित सुकुम्वासी…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो6views